Macluumaad ku saabsan qaaradaha adduunka | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Macluumaad ku saabsan qaaradaha adduunka
Himilo – Duniga waxaa loo qeybiyaa toddobo qaaradood iyo shan badweyn, qaaraduhu waa dhul aad u ballaaran oo biyo ay kala qeybiyaan.
Toddobada qaaradood ee dunida ayaa kala ah Africa, Asia, Antarctic, Europe, North America iyo South America iyo Australia. Todobada qaaradood dhul- iyo dadba wey ku kala ballaaranyihiin
Asia waa qaarada ugu weyn dhanka cabbirka adduunka. Sidoo kale waa midda ugu dadka badan dunida. Qiyaastii 4.6 bilyann oo qof ayaa ku nool. Magaaoloyinka sida Delhi, Tokyo, Shangahai iyo Beijing waa magaalooyinka dadka ugu badan caalamka.
Qaarada Asia waxay ku yaalla dalka ugu qanisan dunida ee Qatar, iyo dalalka saliida ku ugu badan soo saara sida Saudi Arabia, United Arab Emirates iyo Bahrain. Luuqada ugu badan caalamka waxaa looga hadlaa Asia, in ka badan 2,300 oo luqadood ayaa looga hadlaa .
Australia waa qaarada ugu yar caalamka, waxaa lagu naaneysaa qaarada badda
Labada dal ee ugu weyn qaaradan ayaa ah Australia iyo New Zealand.
Qaarada Australia waxa ku nool 43 milyann oo qof, magaalooyinka ugu caansan ayaa ah Sydney, Melbourne iyo Brisbane
Africa waa qaarada leh dalallka ugu badan caalamka waxay ka kooban tahay 54 dal. Waxaa ku nool dad gaaraya 1.3 bilyann oo qof. magaalooyinka ugu weyn qaarada Africa waxaa kamid ah Lagos, Kinshasa iyo Cairo.
Laga soo bilaabo qarnigii 15aad iyo 19aad Africa waxay wajaheysey gumeysi xoogan oo dhibaato u geystay qaarada madow. Labada dal ee ka badbaaday gumeystaha waa Ethiopia iyo Liberia
Africa waxay leedahay webiga ugu dheer caalamka iyo biyadhaca labaad ee ugu weyn adduunka
Waqooyiga America, waa qaarad ay ku yaalaan 23 dalka oo kala ah USA, Canada, Mexico iyo dalalka gacan-ka Caribbean dhaca.
Waqooyiga America waxaa ku yaala Jaziirada ugu weyn caalamka ‘Greenland
580 oo milyan oo qof ayaa ku nool waqooyiga America.
Europe waxaa lagu qeexaa qaarada ugu qanisan adduunka inkastoo dhanka bari ee qaarada ay ku yaalaan dalal faqri ah. Europe waxaa ku yaala labada dal ee dunida ugu yar Vitican iyo Monaco oo saddex dhinac uu ka jir Faransiis-ka.
Marka loo eego qeexitaanka Qaramada midoobey qaarada Europe waxay ka ka kooban tahay 44 dal. Shan kamid ah waxay ku jiraan tobanka dal ee duniga ugu yar.
Koofur America waa qaarada leh muuraha ugu dheer caalamka ‘the Andes’. biyadhaca ugu sarreeya dunida ‘The Angel Falls’ iyo lamadagaanka ugu weyn dhulka ‘The Atacama Desert’ Koofurta America waxaa ku nool 430 milyann oo qof.
Antarctica waa qaarada ugu yar dhanka dadka ku nool Kaliya waxaa qaaradan ku nool cilmibaarayaal ku leh xaruumo cilmibaaris, 90% qaaradan waxaa fadhiya baraf taas oo la macno ah 70% barafka ugu badan in uu yaallo Antaractica.
W.Q: Cali Cabdullaahi Hilowle
Previous: Maxaad ka xasuusataa ciyaartoy xirfadooda ku soo gabagabeeyay MLS
Next: Nin muddo 43 sano u xirnaa denbiyo uusan gelin